TSINGERINTAONAN’NY FREE FM : Nangataka ny hanokafana ny Free TV ny talen’ny Free FM | NewsMada
Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana, tale jeneralin’ny vondrona Free.
Tao anatin’ny fahombiazana tanteraka ny fety fankalazana ny tsingerintaona faha-enin’ny onjam-peo Free FM tetsy amin’ny Kianjan’ny Kanto Mahamasina. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’ny tale jeneralin’ny onjam-peo, Rakotondrazafy Lalatiana no nanamarihany fa efa misy ny onjam-peo, dia ny Free Fm izany, efa misy ihany koa ny gazety, ny Free News, fa ny fahitalavitra sisa no banga.
« Angatahina mba tsy hitanila intsony ny fitondrana eto amintsika ary mba tsy hisy tombo sy ala intsony. Rehefa afaka manokatra fahitalavitra ny fitondrana dia tokony ho afaka manokatra fahitalavitra ihany koa ny mpanohitra », hoy ny antso avo nataony nanoloana ireo olona tonga marobe teny an-toerana.
Hifanaraka isika, hoy ihany Rakotondrazafy Lalatiana, hanao izany fangatahana izany. « Manomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao dia hisy ny sonia hangonintsika hiarahana mangataka izany fanokafana ny Free TV izany », hoy ihany izy nanamafy.
Niara-nifety tamin’ny vahoaka tonga teny an-toerana ny tale jeneraly.
Ankoatra izay, ny masoandro maty no nampahahelo niaraka tamin’ireo artista marobe nanafana ity fankalazana ny tsingerintaona faha-enin’ny onjam-peo Free FM ity. Teo ampamaranana ny fampisehoana nataony avy dia nitondra ny teny firariantsoa hoan’ny onjam-peo ireo artista nandray anjara, isan’izany ry Ga’sta, Raboussa, Elodie, Dah Mama, Princio, Rossy sns…
Nipoaka ny afomanga ary tamin’ny 8ora alina vao nisaraka ampilaminana ny rehetra. Nampanatena ny hisian’ny fihaoanana tsy ho ela ny tale jeneralin’ny Free FM. “Efa-bolana sisa dia ho feno herintaona ny gazety Free News ka asiantsika fety be ihany koa amin’izay fotoana izay”, hoy Rakotondrazafy Lalatiana nandritra ny lahateny nataony.
Nafana tanteraka ny lanonana niaraka tamin’ireo artista marobe
Ny tale jeneralin’ny Group Free, Rakotondrazafy Lalatiana, ny ekipan’ny Free FM sy ny Free News ary ny Fredom dia maneho fisaorana ireo izay rehetra tonga nanotrona iny fankalazana ny tsingerintaona faha-enin’ny onjam-peo Free FM iny. Isaorana ihany koa ireo artista tonga nanafana ny fiarahana sy ireo rehetra nanampy tamin’ny fikarakarana.